डा‍. केसी बचाउन चौतर्फी दबाब
डा‍. केसीकाे मागकाे पक्षमा आन्दोलन सुरु (तस्बिरसहित)
हातमा प्लेकार्ड र पाखुरामा कालाेपट्टी बाँधेर डा‍. गाविन्द केसीका माग पूरा गर्न दबाब दि‌ँदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टरहरु
काठमाडौं– अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको बेला उनको जीवन रक्षाका लागि चौतर्फी दबाब बढ्न थालेको छ । डा. केसीको जीवन रक्षाको अपिल गर्दै डाक्टरहरू सडकमा ओर्लिएका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूले डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै सोमबार दिउँसो प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले आकस्मिक र कोभिड उपचार बाहेकका सेवा छोडेर प्रदर्शन गरेका हुन् । हातमा प्लेकार्ड बाेकेका र पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेका उनीहरूले डा‍. केसीका माग पूरा गर्न र उनकाे जीवनरक्षा गर्न माग गरेका छन् ।
हातमा प्लेकार्ड र पाखुरामा कालाेपट्टी बाँधेर डा‍. गााेविन्द केसीका माग पूरा गर्न दबाब दि‌ँदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय डाक्टरहरू
शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकको प्रदर्शनमा नेपाल चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ । चिकित्सक संघका विभिन्न शाखाका डाक्टरहरू अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि दबाबपूर्ण कार्यक्रममा उत्रेको संघले जनाएको छ । अहिले डाक्टरहरूलाई प्रदर्शनमा उत्रिन आह्वान गरिनसकेको तर सरकारले वार्ताको पहल नगरे सडकमा आउन सक्ने संघका उपाध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीले चेतावनी दिए ।
हातमा प्लेकार्ड र पाखुरामा कालाेपट्टी बाँधेर डा‍. गाेविन्द केसीका माग पूरा गर्न दबाब दि‌ँदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय डाक्टरहरू
उपाध्यक्ष डा.कार्कीले सरकाले ७२ घण्टाभित्र वार्ताको पहल नगरे आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेर सडकमा आउन तयार रहेको बताए । चिकित्सक संघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारलाई वार्ताका लागि ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । डा. कार्कीका अनुसार विभिन्न पक्षसँग अन्तरक्रिया गरेर सरकारलाई वार्ताका लागि अल्टिमेटम दिइएको हो । ‘विभिन्न निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, घचघच्याउने गरेका छौं,’ डा. कार्कीले भने, ‘हामीले स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं ।’
डा‍. गाेविन्द केसीका माग पूरा गर्न दबाब दि‌ँदै हातमा प्लेकार्ड बाेकेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालकाआवासीय डाक्टरहरू
अझै पनि केसीको जीवनरक्षाका लागि राज्य संवेदनशील नदेखिएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै कार्कीले भने, ‘व्यक्तिको ज्यान बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । त्यसपछि वार्ताको माध्यमबाट समस्याको निकास खोज्नुपर्छ ।’
सबैभन्दा पहिला डा. केसीको ज्यान बचाएर उनका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चिकित्सक संघको जोड छ । कार्कीले सरकारसँग प्रश्न गरे,‘नाजायज माग भए किन सम्झौता गरियो ? जायज माग भए किन पूरा गरिएन ?’
डा. गाेविन्द केसीकाे समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय डाक्टर
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल , नेपाली कांग्रेस, साझा पार्टी लगायतका विभिन्न संघ-संस्था तथा व्यक्तिले डा.केसीको जीवन रक्षाका लागि अपिल गरेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ,‘सरकार आफै‌ले लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउनु जिम्मेवार सरकारको लागि सुहाउने विषय होइन । उनका माग अविलम्ब पूरा गरी जीवनरक्षा गरियोस् ।’
डा‍. गाेविन्द केसीका माग पूरा गर्न दबाब दि‌ँदै हातमा प्लेकार्ड बाेकेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टरहरू र अघिअघि प्रहरी
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्मालगायतले पनि केसीलाई भेटेर उनको मागको सम्बन्धमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता शर्मासहित २२ जना नेता कार्यकर्ता शिक्षण अस्पतालमा २२ मिनेट धर्ना बसेका डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए ।
डा. गाेविन्द केसीकाे जीवनरक्षाकाे माग गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय डाक्टरहरू
पोखरामा पनि डा. केसीको पक्षमा सामाजिक अभियन्ता, मानवअधिकारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा बौद्धिक व्यक्तिले प्रदर्शन गरेका छन् । तर, सोमबार बेलुकासम्म सरकारी पक्षबाट वार्ताको कुनै पहल नभएको सुवेदीले जानकारी दिए । आइतबारबाट डा. केसीको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अक्सिजनसमेत दिन थालिएको छ । डा. केसीले १९औं अनशन थालेको सोमबार २२ दिन भैसकेको छ ।
डा‍. गाेविन्द केसीका माग पूरा गर्न दबाब दि‌ँदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय डाक्टरहरू
तस्बिर: दिनेश गाेले
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७७